Dịka otu n'ime ụzọ isi mezupụta nkwa o kwere banyere ihe ọ ga-eme n'ọchịchị ya nke abụọ, aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Willie Obianọ amalitela amụmà nkwado na inye nkụzi pụrụ iche maka ndị ntorobịa, ma bụrụkwa nke a malitere na Nnewi n'isi ngwụcha izu ụka gara aga.
Ya bụ amụmà nkwado na nkụzi bụ nke a chịkọbara site n'aka onye enyemaka pụrụ gọvanọ n'ihe gbasaara ịmụ ọrụ aka ndị ntorobia n'oge gara aga, bụ maazị Eloka Mmadụekwe, sịte na njikọ aka nke ụlọ ọrụ 'Reality Forum', bụ otu ụlọ nnọrọ onwe a ma ama n'ime ntụnye pụrụ iche na mpaghara Nnewi na obodo ndị ọzọ gbara ya gburu gburu nakwa ịkwalite ezo ọchịchị nke otu ndọrọ ndọrọ APGA na steeti ahụ.
Ya bụ Ọgbakọ ahụ, nke isi okwu ya bụ: "Ọmụmụ Ọrụ Aka: Ụzọ Kacha Mma Isi Weta Otútó Nke Ọnọdụ Akụnụba" dọtara imirikiti ndị mmadụ dị iche iche, bụ ndị megoro nke ọma dịka ndị ọrụ aka, nakwa ndị na-ewunye ihe mwunye dị iche iche sitere Nnewi, ma bụrụkwa ndị megoro ihe na-ada ụda na nkwalite nke ọnọdụ akụnụba steeti Anambra na ọnụ ego ala Naịjiria.
Ọtụtụ n'ime ndị a gụnyere maazị Ajụlụ Ụzọdike, bụ onye chọpụtara ụlọ ọrụ ''Cutix Plc.''; dọkịnta Dozie Ikedife, bụ onye ọrụ ahụike na onye nwe ụlọ ọgwụ ''Ikedife Specialist Hospital, Nnewi''; maazị Linus Ilozue, bụ onye isi na ọga kwata kwata nke ụlọ ọrụ "Chicason Group of Companies, Nnewi"; maazị Humphrey Ngọnadị, bụ onyeisi ụlọ ọrụ "Ngonadi Group of Companies", tinyere maazị Pedee Ọfọdeme, bụ onyeisi ụlọ ọrụ "Poncad Integrated Services". Ndị a niile bụkwa ndị a kpachapụrụ anya wee họrọ ka ha wee were ọgụgụ isi na amamihe ha wee metụta ndụ ndị ntorobịa ahụ, bụ ndị chọrọ ịmụ ọrụ aka dị iche iche, nakwa ịmụta otu ha ga-esi chekwaba, kwalite ma hazie obere ụlọ ọrụ ha nwere, ka o wee guzoro n'ogogo dị elu.
N'okwu mmalite ya na ya bụ ọgbakọ, onye nhazi atụmatụ ahụ, bụ maazị Madụekwe kọwara na ọ bụ mmasị ọchịchị nọ ugbu a na steeti Anambra na atụmatụ nkwado ndị ntorobịa Nnewi ahụ ga-enwetazu na ebumnobi niile nke e kwere chịkọba ya, ma kọwaa na dịka oge na-aga, na a ga-ebukwa ya bụ atụmatụ gazuchaa n'okpuru ọchịchị iri abụọ na otu e nwere na steeti ahụ.
A ga-echeta na ọ bụ ihe mere eme na mgbe ọ na-achụ nta nkwado ya nke ugboro abụọ, bụ nke o mechaara wee nweta mmeri dara ụda n'okpuru ọchịchị niile e nwere na steeti Anambra, na gọvanọ Obianọ kwere nkwa ịtụpụta na ịbagide n'atụmatụ dị iche iche iji kwalite ọnọdụ na ọdịmma ndị ntorobịa na steeti ahụ.
N'okwu nke ya, onye chọpụtara ma bụrụkwa onyeisi ụlọ ọrụ Reality Forum, bụ maazị Ụzọ Nwosu mere ka ndị ntorobịa ahụ mara na ọ bụrụ na ha mụchaa ọrụ ọbụla ha chọrọ ịmụ, na a ga-enye onye ọbụla n'ime ha ego mgbazinye ga-ezuru ya ịmalite nke ya, bụkwa ego mgbazinye nke ọmụrụnwa ọbụla adịghị n'elu ya.
Maazị Nwosu, bụ onye chọrọ iji aha otu ndọrọ ndọrọ APGA wee zọọ ọkwa onye nnọchi anya ọgbọ nta nkwado Nnewi Nọọtụ/Sawụtụ/Ekwusigo n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu etiti, mere ka a mara na ebumnobi nke inye nkụzi ọmụmụ na nkwado ọrụ aka ahụ bụ iji mee ka ndị ntorobịa nwee ọrụ aka nke onwe ha, kwụụrụ onwe ha, ma sokwa na-atụnye ụtụ nke ha na nkwalite nke otútó na ọnọdụ akụnụba nke ala anyị. Ọ kọwakwara na nke ahụ ga-enye aka n'ibelata mpụ na arụrụ ala, tinyekwuoro na ọ ga-enyekwa aka n'ikewapụta ọtụtụ ohere ọrụ n'ala anyị.